manam-pahaizana momba ny Haifanafody no sady mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo. 30 taona no nikarohany momba ny fitsaboana nolovaina na “medecine traditionnelle” sy ny zava-maniry azo hitsaboana. Niainga tany Sina ny faramparan’ny desambra 2019 no niparitaka maneran-tany [eoropasy Etazonia] ary tonga teto Madagasikara ny martsa teo ny COVID 19, hoy izy. An-tapitrisany no marary any amin’ny ilabolantany avaratra ary aman’alina no maty. Ho antsika kosa firy avy? Zavatra miisa 2 no azo tsoahana. Mety marina ny hoe mafy toto ny malagasy ary mafy hery fiarovana. Tsy mbola naheno aho hoe nisy maty na tamin’ireo areti-mandringana efa tany aloha aza ny malagasy. Resy lahatra koa anefa aho, hoy ity manampahaizana ity fa ny fomba fampiasana ny fitsaboana nolovaina no nanavotra antsika. Ny sinoa nisafidy ny nanangana hopitaly be tao anaty 3 andro hiatrehana ny COVID 19. Ny antsika avy hatrany dia niparitaka ny Ravintsara, ravina Romarin, kininim-potsy,mandrava sarotra sy ny hafa rehetra. Nisy fotoana niaka-bidy sy nifandrombahana ny sakamalaho sy tongolo gasy. Ny 80%n’ny malagasy dia saika mampiasana io fomba fitsaboana nolovaina io avokoa, hoy hatrany izy, ary izao dia tena resy lahatra fa nanavotra antsika izany ka mbola tokony tohizana, ka ny tsirairay no mahafantatra ny raokandro Malagasy mety aminy sy zakany.